မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XII	15
Posted by Kyaemon on Aug 22, 2016 in Business & Economics, Society & Lifestyle, Think Different | 15 comments
FaceBook မှာ ကိုယ့်ထင်ကြေးနဲ့ကိုယ်ရေးကြတယ်၊မသိဘဲနဲ့ပြောကြတယ်၊
မလေ့လာဘဲနဲ့ပြောကြတယ်၊ လေ့လာဘို့ပစ္စည်းတန်ဆာပလာ အခွင့်
အလမ်း လဲ ချွတ်ယွင်းချို့တဲ့တယ်၊
ဒီကြားမှာ အနောက်ဩဇာခံတွေကလဲ ဖွပေး ကြတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့လို့ အောက်ပါအကြောင်းကိစ္စတရပ်ကို တမျိုးတမည် ထင်မြင်ယူဆကာ မှတ်ချက် အလွဲအမှားတွေရေးကြတယ်၊
လူလည်လုပ်တာ၊ဗိုလ်ကြတာ၊ သူများဆီမှာလာပြီး မစင်စွန့်တာ စသဖြင့် ပြောကြတယ်၊
ဒါတွေ က မမှန် ပါ၊ ဖေ့ဘို့ ကွန်မန့်အ ချို့ကို ပြပြီးနောက် ပိုင်းမှာ
(ပညာရှိကြောင်ပါးတွေက သိရက်နဲ့” ဘေတီး “ပေးကြတာလဲပါတယ်)
တရုပ် နိုင်ငံ မှာ လဲ မြစ်ကြီး တွေ ရှိ တယ်
ဘာ့ကြောင့် တရုပ် နိုင်ငံ က မြစ် တွေ ကို ရေကာတာ မဆောက် လုပ် ရ သလဲ ?????…
ဘာလို့ သူများနိုင်ငံထဲက ဟာမှယူချင်နေရတာလဲ
ဘယ်လောက်ပြောပြော အရှက်ကို မရှိဘူး
သူတိုတရုတ်တွေဆောက်ထားတဲ့ဆည်တွေ အဆင်ပြေလားတိုင်ပြည် မေးကြည်ပါလား သူတိုဆီမှာ မြစ်တွေ ကျန်သေးတာဘဲ့ဘာလိုသူတိုဆီမလုပ်တာလည်း လွယ်လွယ်တွေးကြည့်ပါလား အကျိုးတကယါရှိရင် သူတပါးနိုင်ငံလားဆောက်နေပမလား
မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်.သံလွင်မြစ်ပေါ် ရေကာတာ ဆောက်ရာမှာ တရုတ် နိုင်ငံ ထဲမှာမဆောက်ဘဲ ဘာကြောင့် မြနိမာ နိုင်ငံ ပေါ်ရောက်မှ ဆောက်ရတာလဲ.
မယုံပါဘူး ။ တရုတ်က သူဆီမှာပေါလိုက်တဲ့မြစ်တွေ ဘာလို့ သူတို့နိုင်ငံမှာ ရေအားလျပ်စစ်မထုတ်နိုင်တာလည်းဗျာ။
တခု တော့မေးကြည့်ချင်တယ် တရုတ်ကသူတို့နိူင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံထက်
ထဲမှာ မြစ် ချောင်း ရေတံခွန် ဘာတခုမှမရှိဘူးလား ဘာကြောင့်သူ့တိုင်းပြည်သူမလုပ်သူများနိင်ငံမှာလာလုပ်ချင်ရတာလဲ ဟိုမှာပေးမလုပ်လို့လာ ဒီမှာအလကားရလို့လား
မြစ်ဆုံကို တရုတ်ကဘာကြောင့်လိုချင်သလဲ စဉ်းစားပါ သိပ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်နော်
တည်ဆောက်ပြီးတဲ့တနေ့ ကြရင်တို့ နိုင်ငံကိုဒီကောင်တွေဒီရေကာတာနဲ့ပဲခြိမ်းခြောက်မှာကို
စိုးရိမ်မိပါတယ်တည်ဆောက်ပြီးလို့ ဒီရေကာတာတခုခုဖြစ်ရင်တို့ လူတွေပဲထိခိုက်နစ်နာမှာဒါကြောင့် 
တရုတ်မှာ နောင်နှစ်တွေ ကြာလာရင် ရေအရင်းမြစ်မရှိတော့ပါဘူး ရေကာတာကြီးတည်ဆောက်ပြီးရင်
ရေတင်ပို့မယ် လျှပ်စစ်တွေယူမယ် ……
တရုပ် အဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်ချင်လို့ စ ကမ်းလှမ်းတာမဟုတ်ပါ၊
UK ယူကေ သံအမတ်ဟောင်းVicky Bowman ရေးတဲ့စာအုပ်က ကောက်နှုက်ချက်၊
၁၉၅၂ ခုနှစ် မှာမြန်မာအစိုးရက ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုပ်နိုင်ငံ
တို့ကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ဘို့ လိုက်ဆွယ်တာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်
……Project was once the common aspiration of the people in Myanmar. What’s more, the Myanmar Government had put forward the plan of Myitsone Dam construction in 1952. Later, the Myanmar Government had looked for many investors in Europe, Japan, China and other countries and regions. However, due to various problems such as fund, electricity market and western sanctions, the project was not successfully approved”.
၂၀၀၁ ခုနှစ် မှာ တရုပ်အစိုးရ ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြန်တယ်၊
ဒေသခံ နိုင်ငံရေး မ တည်ငြိမ်မှုကြောင့် တရုပ်အဖွဲ့အစည်းတွေက နောက်ဆံတင်း
အာမခံချက်တွေကို အခါခါပေးခဲ့တယ်၊ အထူးသဖြင့်နောင်သမတဖြစ်လာတဲ့
ဦးသိန်းစိန်က တရုပ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဌာနတွေလုပ်ငန်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ်
အသွင်ဆောင် ဗန်းပြနေတာက မမှန်ပါ၊
The Myanmar Government finally expressed their intention to China. The Myanmar Government began to contact the Chinese Government through various channels since 2001, and invited Kunming Hydroelectric Investigation and Design Institute in 2003 to makeasurvey of “Myitsone Dam on the Ayeyawady River,aMulti-purpose Water Conservancy Project”. Compared with the urgency of Myanmar Government, the Chinese enterprises were very cautious during the early contact due to the complex political and social situations in this region. To promote the project progress, the higher-ups of Myanmar Government, the high- ranking military officers and the local leaders expressed their goodwill many times to the Chinese Government. Particularly, Thein Sein, who became the President of Myanmar later, went to the relevant departments and enterprises in China many times for mobilization and also made the commitments. Under the enthusiastic promotion by Myanmar Government, in the 3rd China-ASEAN Business & Investment Summit held in October 2006, the Myanmar Government and China Power Investment Corporation finally reached the investment agreement. In the same year, they signed the memorandum of understanding (MOU)”. “The ordinary people withasmattering of knowledge of Myitsone Hydropower Project, have an impression that it isaproject actively promoted by China via the higher-ups in Myanmar, and Myanmar is passive and unwilling. However, the practical situation is widely divergent from this opinion. In fact, the Myitsone Hydropower Project isaproject strongly promoted by the Myanmar Government”. “The Development of Myitsone Hydropower
၂၀၀၆ မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း (ဒုမှူးချုပ်ကြီး) စိုးဝင်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရင်းနှီးဘို့ စီပီအိုင်ကိုဘိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်၊
မြန်မာဝန်ကြီးဌာန တစ်ဆယ်ကျော် က ပါဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်၊
……CPI also said that then-prime minister General Soe Win had been the one to invite them in 2006 to invest in Myanmar’s development by building the dam. “During the negotiation process, more than 10 [Myanmar] ministries participated in the negotiations and reviews,” said the company’s statement.
ဖွံ့ဖြိုးကောင်းစားဘို့ နိုင်ငံတကာကို သွားသွားပြီးအရင်းအနှီးမြှုပ်နှံဘို့ဘိတ်တယ်၊
အာရှအလယ်ပိုင်းIraq အီရပ်နဲ့Afghanistan အက်ဂန်နစ်တန်မှာ တပြိုင်နက် ၁၂ နှစ် ကျော် စစ်ပွဲတို့မှာ၎င်း၊ Libyaလစ်ဗီရား နဲ့Syria စီးရီးယားမှာ၎င်း၊ ဗုံလိုက်ကြဲ စစ်စရိတ် ကုန်လို့လဲ
နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ကြေးတွေသိပ် မ ပေးနိုင်တော့ပါ၊
တရုပ်၊ ဂျပန် တို့ဆီက billion$ ထောင်သောင်းနဲ့ချီပြီး ချေးယူရတုန်းဘဲ၊
kai says: ဒီချိုင်းနားပြည်ထုတ် သတင်းထဲပါတာလေးကို.. မှတ်တမ်းထား တင်ထားချင်ပါတယ်..။
အဓိပ္ပါယ်တော့.. ဖဘမှာတယောက်ဘာသာပြန်ထားသမို့.. မှန်းသမ်းသိ..။
ဦးကြောင်ကြီး says: တလုပ်သဘုံကြေးမုံဂျီးများ လှူ လျှာလှုပ်လို့ ၇၈၆မာမူသဂျီးရယ်…
apolo11 says: The Voice မှာ ပါတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ
တရုတ် မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အမှား
14-Sep-2016 tagged as စီမံကိန်း မြစ်ကျဉ်းသုံးသွယ်
တရုတ် အစိုးရ အဆက်ဆက်ဟာ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် စီမံကိန်းကို မှားတယ်လို့ ပြောဖို့ အင်မတန် ဝန်လေးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုထင်ရှားလာပေမယ့်လည်း မူဝါဒ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ တာဝန်ခံဖို့ အရမ်း ခက်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ အပြစ် ပြောချင်ရင်တောင် ခေါင်းခံမယ့်သူ ပြန်ရှာဖို့ ခက်သွားပါပြီ။ သို့သော် ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ဆည်ကြီးကပဲ ရေကြီးတာရော၊ မိုးခေါင်ရေရှားတာရော ထပ်ဖြစ်စေတယ်လို့ စွပ်စွဲသံတွေ ထွက်လာတာ ပိုကျယ်လောင် လာခဲ့ပါပြီ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ အရှည်ဆုံး မြစ်ဖြစ်တဲ့ ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်မှာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်သူတွေဟာ မြစ်ရေ တိုက်စားတာကြောင့် ကမ်းပါး ပြိုတဲ့ဒဏ်ကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပြီး ခံလာရပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အကြီးဆုံး ရေလွှမ်းမိုးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သြဂုတ် လဆန်း ကြေညာချက်အရ ဇူလိုင်တစ်လလုံး ရေကြီးခဲ့တာကြောင့် ပျောက်ဆုံး သို့မဟုတ် သေဆုံး စုစုပေါင်း ၇၆၄ ဦးခန့် ရှိခဲ့ပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသူပေါင်း ရှစ်သန်းကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ စာရင်းထဲမှာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ အာမခံကြေး ပြန်ရစရာ ရှိပါတယ်။ အချိန်မီ သတင်း မပေးလို့ဆိုပြီး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဒေါသ ထွက်ခဲ့တာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာမြေပေါင်း ဧက ၁၈ သန်းလောက် ထိခိုက် ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် တစ်နှစ်တည်းကို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၃၃ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ လူပေါင်း ၁၁ သန်းလောက်အထိ နစ်နာခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာရင်း အရှည်ကြီးဟာ တကယ်တော့ မိုးများတာချည်းသက်သက်ကြောင့် ရေကြီးတဲ့ဒဏ်ကို ခံရလို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ရေကာတာကြီးကြောင့်လည်း ဖြစ်ရတယ်လို့ မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေ ပြောခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ရာသီဥတုကလည်း ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် မြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်က မြို့ကြီးတွေဟာ ပိုပြီး သဘာဝ ဘေးဒဏ်ကို ခံလိုက်ရတာနဲ့အမျှ ဒီဆည်ကြီးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို ငြင်းခုံ မေးခွန်း ထုတ်လာကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း မြို့ပြ ချဲ့ထွင်တာကို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ လုပ်ခဲ့တော့ ယခင် ရေနက်ကွင်းတွေ စိမ့်မြေတွေ မရှိတော့တာကြောင့် ရေစီးသွားစရာ နေရာ မရှိတော့ဘဲ လူနေ ဧရိယာတွေသာ ရေတွေ လျှံလာတဲ့ဒဏ်ကို ခံကြရတာကိုလည်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရှိလာရပါတယ်။ အရင်ကတော့ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီး ပြီးသွားရင် ရေမကြီးတော့ဘူး၊ ရေဘေးကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ဆည်ကြီးကို ဆောက်ခဲ့တာပါ။ မော်စီတုန်းလက်ထက်က မြစ်ဝါမြစ်ပေါ်မှာ ဆောက်တဲ့ဆည်ကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ တရုတ်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ဗဟိုရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗျူရိုရဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီး မြစ်ကြောင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Huang Wanli ကတော့ မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီးဟာ နုန်းပို့ချမှု သိပ်များပြီး ပြည့်လျှံလာမည့်နှုန်း မြန်တာကြောင့် မကြာခင်တော့ ပြန်ပြီး ဖျက်ပစ်ရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့ အပြစ်ကို ထောက်ပြတာကို ဆတ်ဆတ်ထိ မခံဖြစ်နေသေးတာကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဒီဆည်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးသားကြတာတွေကို ဆင်ဆာ ဖြတ်တာကလည်း တရုတ်အစိုးရရဲ့ အလုပ် တစ်ခု ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
သို့သော်လည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုဆိုးလာတဲ့ ယန်ဇီမြစ်ရဲ့ အခြေအနေက ဖုံးထားလို့ မရပါဘူး။ ဆည်ကြီးက ရေလွှမ်းမိုးမှုကို လျော့အောင် လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့ အစိုးရရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနကတော့ တွင်တွင် ပြောနေတုန်းပါပဲ။ နှစ်တစ်ရာအတွင်း အဆိုးဆုံး ဖြစ်မယ့် ရေလွှမ်းမိုးမှုမျိုးကိုတောင် ကာကွယ်ထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ရေကာတာကြီးကို ကာကွယ်နေတုန်းမှာပဲ တစ်ဖက်မှာလည်း ဝေဖန်သံတွေ ကြားလာရပါတယ်။ Tsinghua University က အင်ဂျင်နီယာဌာနရဲ့ ပါမောက္ခ Zhou Jianjun က ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ဖို့ ဆည် တစ်ခုတည်းကို အားကိုးဖို့ဆိုတာ သိပ်အန္တရာယ် ကြီးလွန်းတယ်လို့ သတိပေးပါတယ်။ တရုတ် ကျွမ်းကျင်သူတွေထဲမှာတော့ ဒီဆည်ကြီးကြောင့် ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်ကို သိပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောဖို့တော့ နှုတ်တွန့်ကြပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဟိုအရင် မော်စီတုန်း ခေတ်မှာကတည်းက မြစ်ဝါမြစ်ပေါ် ဆည်ဆောက်တာကို ဝေဖန်တဲ့ ပညာရှင်တွေကို ရာထူးက ဖြုတ်ပြီး အလုပ်ကြမ်းနဲ့ နယ်နှင် ပစ်တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံပါ။
ယန်ဇီမြစ်ဝှမ်းက ပြည်သူတွေ တဖြည်းဖြည်း သဘော ပေါက်လာတာကတော့ ဒီမြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ဆည်ကြီးဟာ ရေလွှမ်းမိုးတာကို ကာကွယ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ လိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ကို ထုတ်ပေးဖို့သက်သက်ပဲ ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဆည်ဆောက်တာ ကောင်းကြောင်း ပြောနေသူတွေကတော့ ဒီအချက်တွေကို ငြင်းဆန်နေကြတုန်းပါပဲ။ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသနဌာနက သုတေသီ ဝမ်ယီနမ်က ဒါတွေက ဆည်ကိုသက်သက် နာမည်ဖျက်တာလို့ တရုတ်စီးပွားရေး ရီဗြူးဂျာနယ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဆည်ကြီးထဲမှာ နုန်းအနည်တွေ များလာတာကို ဘယ်သူမှ မဖုံးနိုင်ပါဘူး။
နုန်းတွေ ဆည်ကြီးထဲမှာ အိုင်လာတာနဲ့အမျှ ဆည်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တည်နေတဲ့ ရေကြည်တွေချည်းပဲ မြစ်အောက်ပိုင်းကို စီးဆင်းသွားတဲ့အခါ ဒီရေကြည်စီးကြောင်းတွေက မြစ်ဘေး ကမ်းပါးတွေကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ တိုက်စား ပစ်ပါတော့တယ်။ မြစ်ကမ်းပါဘေးက မြေသားတွေ ပြိုဆင်းလာတာနဲ့အမျှ မြစ်ကောလာ၊ ရေကြီးလာတဲ့ဒဏ်ကို ယန်ဇီမြစ်လယ်နဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်းကလူတွေ သိသိသာသာ ခံစားလာရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ နှစ်တိုင်းလိုပဲ မြစ်ကမ်းပါးပြို ရေကြီးတာက ပုံမှန်လို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ Hubei နဲ့ Hunan ပြည်နယ်ကြားမှာဆိုရင် ၂ ဒသမ ၁ မီတာလောက် မြစ်ကြမ်းပြင်တိမ်သွားပြီး သဲတွေ ကုဗမီတာသန်းပေါင်း ၁၅ဝ လောက် ပြိုဝင်သွားတယ်လို့ အစိုးရကပဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် အစိုးရအနေနဲ့ မြစ်ကြောင်းပြန်ပြင်ဖို့ကို သန်းပေါင်းများစွာ ပြန်ပြီးရင်းနှီး မြှုပ်နှံရပြန်ပါတယ်။
၂ဝ၂ဝ အထိ Hubei ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ မြစ်ကမ်း မပြိုအောင် ယွမ်ငွေ ၅ ဘီလီယံ သုံးစွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သုံးစွဲနေရပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ မြစ်ကမ်းပြိုတာကို ထိန်းနိုင်ဖို့ အဝေးကြီး ရှိပါသေးတယ်လို့ တရုတ် ရေသယံဇာတ အဖွဲ့က ဝေဖန်ပါတယ်။ ဆည်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကုစားဖို့ ကုန်ကျရမယ့် စရိတ်တွေဟာ ဒါအစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ တရုတ် ရေသယံဇာတ အဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေမှာ အတိအလင်း ဝေဖန်မှုကို တားဆီးကြပေမယ့် အရင်ကတည်းက ဒီဆည်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပူပန်မိကြောင်း တရုတ်အရာရှိတွေ ကြားထဲမှာတော့ ကြားရလေ့ ရှိပါတယ်လို့ အီကော်နော်မစ် မဂ္ဂဇင်းက ရေးဖူးပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ မှားယွင်းကြောင်း ဝန်မခံချင်ပေမယ့်လည်း ၁၉၉၂ မှာ အတိုက်အခံတွေ မရှိတဲ့ ရော်ဘာ တံဆိပ်တုံး ပါလီမန်ကနေ အတည် ပြုပေးလိုက်တဲ့ ပရောဂျက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို မြင်နေကြရပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ မှာ ပြီးစီးသွားတဲ့ ဒီဆည်ကြီးကို ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ပိုပြီး ဆိုးရွား လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးထဲ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အရာရှိတွေ ကိုယ်တိုင်က ဆည်ကြီးရဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှု ထိန်းချုပ်နိုင်အားကို အရှိထက် ပိုတွက်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာကို အရိပ်အမြွက်မျှ ပြောဆို လာကြပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင် ကိုယ်တိုင်က ဒီဆည်ကြီးဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အမှားတွေ ပါခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ဆည်ကြီးကြောင့် ရေကြီးတာ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ မြစ်ကြောင်းထဲ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ရေတင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများနဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်း ဒေသများအား ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းများပါ ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်နေဆဲ ကာလမှာပဲ ဒီဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာတော့မှာကို ကြိုမြင်ခဲ့ကြပေမယ့် အခြေအနေအရ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ထုတ်ပြောဖို့ ခက်ခဲခဲ့ကြတယ်။ ဝမ်ကျားပေါင်က ဝန်ခံခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ တရုတ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူ အုပ်စုတွေ အနေနဲ့ ပိုပြီး မချိတင်ကဲ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ခုတော့ နုန်းတွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပြီး ဆည်ကြီးထဲမှာ သိုလှောင်ပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ယန်ဇီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကို နှစ်စဉ် ပို့ချနိုင်မည့် နုန်းအနည်အနှစ် ပမာဏကတော့ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျော့သွားတယ်လို့ National Geographic မဂ္ဂဇင်းက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ နွဲ့ကေခိုင်
သျှားသက်မာန် says: ခုမြစ်ဆုံရဲ့ အခြေအနေကဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလိမ့် ရင်လေးတယ်..
မင်း ခန့် ကျော် says: မြစ်ရေစီးကြောင်း ပင်လယ်ဝအထိ ဘယ်လိုများသက်ရောက်မူ့
မင်း ခန့် ကျော် says: မြစ်လမ်းကြောင်းကို ဆည်ရှိနေသ၍ ဘယ်ဘက်က
kai says: စာချုပ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး..စာချုပ်ထဲ.. အဲဒီဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ရေအရင်းအမြစ်စီမံရေးနဲ့..
တတိယပါတီ(ဥပမာ ..ဆွဇ်ဇလန်နိုင်ငံ) က.. ပညာရှင်တွေက.. ဆန်းစစ်ထိန်းကြောင်းမှုအောက်မှာ.. ဆက်လုပ်ဖို့ .. တိုက်တွန်းနေတာပါ..။
ချိုင်းနားက.. နောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ထင်တာပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: နောက်ကိုအသာကလေးတော့ မဆုတ် စေချင်။
တော့ပြန်လျော်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: အောက်ကလည်းနေသေး.. ကြောက်ပြီလားလို့အော်တာဖြစ်နေပြီ ကိုရင်ရယ်..။
ပီကင်းကို ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့များ တက်သိမ်းဖို့ကြံနေ(ပြန်)ပလားတော့မသိ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: မြင်မာ လေ သူကြီးရဲ့ မြင်မာ
စက္ကူ စက်ရုံလာတည်သွားပြီ သူကြီးရဲ့။
လေနဲ့ပဲသိမ်းကြတာပေါ့ Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟိုအရင်နှစ်တွေကတော့ အမေစုက မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာချုပ်ကို သူလုံးဝမမြင်ရသေးဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အခုကော မြင်ပြီးပြီလား။ ကော်မရှင် ဖွဲ့တယ် ဆိုကတည်းက လုပ်တော့မယ်ပေါ့။ တိုင်းပြည်ကို ဘာမှ မချပြရသေးဘူးနော်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တရုတ်ကတော့ လွယ်လွယ် လျှော့ပေးမယ် မထင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာက ငလျင်ကြီးဒဏ် ခံ မှ မဟုတ်တာ။ ဆည်မြောင်းဦးစီးက စဉ်းစားထားတဲ့ ၈ဘီလျံ တန်ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ တည်ဆောက်ကာလ ၈ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိ ကြာမယ်ဆိုတော့ ဒီကြားထဲ ဘယ်လိုဆက်စခန်း သွားရမလဲ မသိ။
kai says: ပိုက်ချံမှမရှိတာ.. မျစ်မမရယ်..။
မေတ္တာလေးပါ.. ပို့လိုက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အမှန်ကတိုင်းပြည်အတွက်လျှပ်စစ်ကအမြဲလိုနေတာပါ
လျှပ်စစ်ရကြောင်းထဲမှာလဲရေအားကဘေးကင်းပြီးဈေးအသက်သာဆုံးပါ
တဦုးတဖွဲ့အတွက်များများမဖြစ်ဖို့အဓိကကြည့်ရပါမယ်